Wixii aan faalleeyey 8dii Febraayo. 2017kii, ayaa haysata Farmaajo iyo Villa Somalia. Qore Sare: Suldaan Gar Yare. – Shabakadda Amiirnuur
May 13, 2019 4:15 pm by admin Views: 173
Aqoonyahan Suldaan Maxamad Garyare ayaa wuxuu qoray Maqaal dhab ka hadal ah oo aad ka heli karto macluumaad badan oo la xiriira khalkhalka siyaasadeed ee DF iyo halka ay ku dambeyn kareyso, waxaana uu Suldaanku qormadiisa ku billaabay sida tan: Saacado ka dib markii Farmaajo loogu sameeyey wax la yiraahdo codeyn (voting) xarunta Ciidanka Booliiska Soomaaliyeed (scuola di polizia), ayaan qoraal yar oo kooban soo dhigay barta aan ku leeyahay facebuugga.
Qoraalkaas waxyaalihii aan ku saadaaliyey waxa ka mid ahaa in aan Farmaajo ka gudbi doonin dhawr siriqood oo loo dhigi doono (political traps), kuwaas oo lagaga dhammayn doono muddada loo codeeyey, dad badan oo imminka jecel, rajana ka sugaaya in uu dawlad Soomaaliyeed hoggaanka u qabtana ay muuqan doonto iyaga oo dhaleeco iyo cambaareyn dusha ka saaraya, dhaan dabaggaallaha ay hadda rumaysan yihiina uu beenoobi doono. Haddaba maxaa hadda muuqda?
Waxa muuqata in geeddisocodkii dhismo dawladeedka (State building process) oo ahaa hawsha dawladda dhexe (central government function) loo igmaday ay gacanta u gashay dawlad goboleedyada xubnaha ka ah waxa lagu sheego federaalka dadka lagu jahwareeriyey.
Waxa su’aali aysan ka taagnayn in dawladgoboleedyadu ay hadba sida ay doonaan u rogrogayaan jaangoynta iyo qorshaha siyaasadeed ee dalka, taas oo ahayd shaqadii dawladda dhexe balse aqoon yari iyo fudeyd siyaasadeed (political incompetent) uu halkaa gaarsiiyey xubnaha dawladda horjoogaha ka ah, Farmaajo iyo Kheyre. Waxa aan shaki ku jirin qofkii Alle (swt) gaarsiiyo in muddadu kaga dhammaan doonto labadan nin xarig jiidka ay dawlad goboleedyadu ku bilaabeen, kaas oo imminka u muuqda in uu helay awood sababaysan oo ku doodaysa in dawladda dhexe aysan istaahilin xilka ay dalka u hayso, taas oo ah in aan madaxda dawladda dhexe lahayn hannaankii hoggaamineed (leadership model).
Waxa ay tilmaamayaan dawladgoboleedyadu in ay madaxda dawladda dhexe adeegsanayso waxa la yiraahdo siyaasadda cabsigelinta (politics of fear), taas oo aan habbooneyn xilliggan maaddaama ay dawladdani ku timi islaqaadasho iyo isqancin (consensus) oo aan cidina cid kale awood ku muquunin karin. Waxa kale oo meesha ka maqan ayey leeyihiin dawlad goboleedyadu hannaanka siyaasiintu u hadlaan oo ah asluub siyaasadeedka (political correctness), oo ah haddalo siyaasadeed oo aan xanaf lahayn cidna dhaawacayn. Isku soo wada duuboo waxa muuqata in ay adag tahay in laga gudbo dhammaan cilladahan aan soo sheegay wakhtiga u haray Farmaajo iyo Kheyrana uu sidaas ku dhammaan doono haddii aan midkood sii tegin ka hor muddada ay haystaan hoggaaminta dawladda dhexe oo ay imminka ka harsan tahay wax ka yar labaatan (20) bilood.